ခြေကျင်းပံ့ပိုးမှုစက်ရုံ - China ခြေကျင်းပံ့ပိုးမှုထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ
ခရမ်းလွန် / အအေးကာကွယ်ခြင်း
နောက်သို့ & ပခုံး
ကြောင်ကြွက်တက်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာကြောင့်နာကျင်မှုကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်သက်သာစေရန်ခြေကျင်းထောက်ကိုအသုံးပြုသည်။ Double-channel silicone anti-skid strip, 3D ရှုထောင့်သုံးခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောနည်းပညာ၊ silicone mat နှစ်ဆကာကွယ်မှု၊ breathable dehumidification သည် sultry ကိုငြင်းဆန်သည်။ ၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းခြေကျင်းအဆစ်ဒဏ်ရာကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ပြီးခြေထောက်၏ကြွက်သားများနှင့်အဆစ်များကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်။
တစ် ဦး ကအပိုင်းအစခြေကျင်းထုပ်ပိုးထောက်ခံမှု
အဆိုပါပစ္စည်းသည်ဆံပင်မရှိသော OK ထည်ပေါင်းစပ် SBR ရေငုပ်ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ယာဉ်တွင်အပ်လေးချောင်းနှင့်ခြောက်လိုင်းချုပ်ရိုးများကိုအသုံးပြုထားပြီးအထက်နှင့်အောက်ပိုင်းပါးစပ်ပုံမော်တော်ယာဉ်များကို စုစည်း၍ အသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။ ခြေကျင်းကာကွယ်ရေးကိုခြေထောက်အဆစ်၏ကာကွယ်မှုကိုခိုင်မာစေရန်အသုံးပြုသည်။ ဤပုံစံသည်ခြေကျင်း၏အရွယ်အစားနှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်သည့် open-type wear နည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးသည်။
ချည်များကိုစုပ်ယူပြီးခြေထောက်ကိုခြောက်သွေ့စေပြီးအမွှေးအကြိုင်ကင်းစေသည့်အထူးထည်၊ ကြွက်သားဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ မတူညီသောအဆစ်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်အထူးချုပ်ထားသောနည်းပညာဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ပေါင်နှင့်ခိုင်ခံ့သော, လက်ခြေလက်မှဆင်းလျှောတားဆီး။ အကာအကွယ်အပြည့်ဖြင့်ခြေထောက်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာစေပြီးဖနောင့်နာကျင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
တာရှည်ခံချိန်ညှိနိုင်သည့်နီနိုပရင် - ရောစပ်ပစ္စည်း၊ ၁၁ ပေအထိပေအလုံးပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ ပွင့်လင်းဖနောင့်ဒီဇိုင်းသည်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအားကစားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အသက်ရှူနိုင်သော neoprene ပစ္စည်းသည်အပူကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးအရေပြားကိုယားယံစေသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း၊
ဇာ -up, ခြေကျင်းသတ္တုအထိမ်းအချုပ်
၎င်းသည် neoprene၊ elastic၊ durable နှင့် breathable နှင့်မြန်ဆန်သောခြောက်သွေ့သောလက္ခဏာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်သင်တစ်နေ့တာသုံးရန်အဆင်ပြေစွာခြေကျင်းတည်ငြိမ်စေနိုင်သည်။ ခြေကျင်းပံ့ပိုးမှုပတ်ပတ်လည် 360 ဒီဂရီ, တည်ငြိမ်မှု, ပိုမိုအားကောင်းထောက်ခံမှု။ အားဖြည့်ထားသောဘေးထွက်တည်ငြိမ်မှုများနှင့်ပုံသဏ္archာန်ပုံစံဒီဇိုင်းများနှင့်အတူခြေကျင်းသတ္တုအထိမ်းအချုပ်လျင်မြန်စွာခြေကျင်းပေါ်နာကျင်မှုနှင့်ဖိအားကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ပစ္စည်း Neoprene အရွယ်အစား S၊ M, L, XL အရောင်အသားအရေလှုပ်ရှားမှုသည်ခြေကျင်းကိုကာကွယ်ပါ၊ နွေး။ လုံခြုံစွာထားပါ။ သာလွန်ကောင်းမွန်မှု ၁.К တိကျသော ၂။ ​​ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ၃. တာရှည်ခံနိုင်မှု ၄.К သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်လက္ခဏာများ။ ထောကျပံ့ခြေကျင်း 3. ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသော 4.Elastic ဒီဇိုင်းသည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။